Ihe ị ga-ahụ na Oslo | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Oslo, Ihe ị ga-ahụ
Taa akwụkwọ akụkọ mpụ na usoro ihe omume telivishọn nke si n'ebe ugwu Europe na-ewu ewu. Na Netflix e nwere ọtụtụ ihe ndị Swedish, Norwegian ma ọ bụ Finnish ka anya ndị njem nleta si yie m anya na ọ na-adabere n'akụkụ ala ndị oyi kpọnwụrụ. Kwupụta Oslo, dịka ọmụmaatụ.
Isi obodo nke Norway Ọ bụ obodo ochie mara mma nke nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye ndị ọbịa ya. Ọ bụ ọnụ ụzọ ámá nke mba mara mma mara mma ma eleghị anya n'oge ọkọchị ọzọ ị nwere ike ịga. Ọ bụrụ otu a, tụọ aka ihe i nwere ike ime na Oslo.
2 Ebe nkiri ndị njem nlegharị na Oslo
Isi obodo ahu di otu obodo kacha nwee onu ogugu na obodo ma otu n'ime obodo ndị kasị ochie na Europe dịka e siri hiwe ya n’afọ 1048. N’oge ahụ ọ rughị elu Bergen ma ọ bụ Nidaros mana ugbua n’etiti narị afọ nke XNUMX na nke iri na anọ aha ya bụ King Haakon V kpọrọ ya isi obodo ma si ebe ahụ malite itolite.
Dị ka obodo ọ bụla ochie, ọ tara ahụhụ mbibi site n'ọkụ mana ọ na-ewughachi ya mgbe niile. Na narị afọ nke XNUMX oge ịba ọgaranya malitere na narị afọ nke sochirinụ, e wuru ụfọdụ ụlọ kachasị mma n'obodo ahụ. Site na mgbe ahụ aha ya bụ Cristania ọ bụ ezie na Oslo laghachiri na mgbanaka na 1924. Naanị ịgbakwunye ozi akụkọ ihe mere eme Oslo dabara n'aka ndị German na Agha Worldwa nke Abụọ n'ihi usoro agha ya dị mkpa.
Obodo Ọ dị na fjord nke otu aha ahụ, ọbọp n'etiti ugwu na ugwu nta Ala. E nwere ọtụtụ agwaetiti ma gbaa gburugburu. Oge mmiri dị jụụ ọ bụ ezie na ebili ọkụ nwere ike ijide gị, yana winters bụ n'ezie ọjọọ na okpomọkụ mgbe mwepu efu degrees.
Ebe nkiri ndị njem nlegharị na Oslo
Ihe nketa Viking bụ otu n'ime ihe ndị njem nleta na Oslo ka ị ghara ịhapụ obodo ahụ na-enweghị ịga na Viking Museumgbọ mmiri Museum. Ọ dị na peninshula na na-eche otu n'ime ụgbọ mmiri Viking kachasị mma n'ụwa nke achọtara n’ili.
Lọ ihe ngosi nka na-eme ihe nkiri a na-akpọ Vikings dị ndụ ụbọchị niile site na ụlọ na mgbidi dị n'ime ebe ngosi ihe nka na oge nleta ị ga-ahụ ihe niile achọtara na ihe ochie.
Na tiketi a ihe ngosi nka ị nwere ike ịga na ọzọ, na Muselọ ngosi ihe mgbe ochie, ọ bụrụhaala na ọ ga-ewe ihe karịrị 48 awa iji mee nleta nke abụọ. Ga n'ihu na nleta na nleta akụkọ ihe mere eme bụ Ebe nchekwa Akershus. Ọ dị mma ileta n’ụbọchị anwụ na-acha. Ihe owuwu a ụbọchị site na 1299 na ọ bụ a ochie ebe e wusiri ike nke e modernized site na oge na otú, taa, nwere Renaissance e ji mara.
Maka ebe a e wusiri ike Enwere njem njegharị na nnabata bụ n'efu.ka. Njegharị na-eduzi n'oge okpomọkụ bụ kwa ụbọchị ma na-ekpuchi ma mputa na ime. Na mpụga oge ọkọchị, njem njegharị bụ naanị na ngwụsị izu. Ọ mepee site na elekere isii nke ụtụtụ ruo elekere 6 nke etiti abalị n'etiti Jenụwarị 9 na Disemba 1. Ebe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Ramlọ ihe nkiri Fram kedu maka pola ụgbọ mmiri Fram.
Fram bụ aha nnukwu ụgbọ mmiri siri ike, ma eleghị anya ubom eto emi enyenede odudu akan, ịnyagharịa ice creams n'ebe ugwu na ndịda. N’ebe ngosi ihe mgbe ochie ahụ, ị ​​ga-abanye n’ime ụgbọ mmiri ma mụta maka otu ndị n’oge gara aga si lanahụ ihu igwe oyi. Ihe ngosi a di otutu asusu, Spanish gunyere. Ọ na-emepe site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede.
Ebe ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Ebe a na-edebe ihe banyere ala na ebe a na-edebe ihe gbasara anụmanụ. Nke a na-elekwasị anya na anụ ọhịa nke Norway na ụwa, na ntụrụndụ nke ụmụ anụmanụ na ọdịdị ala. Nke mbụ mechiri emechi taa ma jụọ mgbe ị gara na ọ nwere ike meghee ụzọ ya ọzọ. Ha abụọ bụ akụkụ nke Ebe ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụrụ na ị chọghị ịkwụ ụgwọ tiketi ị nwere ike ịga na Tọzdee, nke bụ n'efu.
El Ogige Botanical ọ dịkwa nnọọ mma ma dịgasị iche iche na a Obosara Ebe obibi nwere ala dị iche iche dị 1800 na nnukwu ụlọ osisi ochie ma sie ezigbo ike nke bara uru na nke a na-emebu ebe obibi ndị mọnk na Middle Ages.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ogige ntụrụndụ ma ọ bụ anwụ na-acha na mbara igwe ma ịchọrọ ịnọ n’èzí na-ekpori ndụ ụbọchị ahụ ga-abụ ụbọchị dị mma iji gaa Ogige ntụrụndụ nke TusenFryd, si otú a ogige kasị ukwuu na Norway. Ọ nwere ihe karịrị ebe nkiri 30 na ụlọ ahịa, carousels, ala coasters na egwuregwu ndị ọzọ.
Ọbụna n'oge okpomọkụ e nwere ogige mmirima ọ bụ jiri ọdọ mmiri, osimiri na nsụda mmiri. Ogige ọzọ, ma ọ bụghị egwuregwu, bụ Ogige Ugwu Vigeland, na-ewu ewu.
Ọ bụ n'ime Frogner Park na-emekwa ihe karịrị Ihe osise 200 site n'aka Gustav Vigeland, onye omenkà amụrụ na narị afọ nke XNUMX. Emere ha na granite, ígwè na ọla kọpa na ọ bụ saịtị na-ewu ewu n'ezie ebe ọ na-enweta ihe karịrị otu nde nleta kwa afọ.
Admission bụ n'efu n'afọ niile. Ihe dị egwu! N’ime ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie a raara nye onye na-ese ihe, ebe a na-ere nri nke nwere tebụl dị n’èzí na ebe ọbịa na ụlọ ahịa ihe onyinye dị mma maka icheta ihe ncheta.
N'ikpeazụ, anyị nwere Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Norway. Ọ buru ibu ma ọ bụ n’èzí. Ọ ụlọ a ngụkọta nke Traditionallọ 155 sitere na mba niile, ọbụna ụlọ ụka mara mma site na 1200s.
Ọ bụ ebe dị mma iji mụta banyere akụkọ ntolite, ọdịbendị na akụkọ ọdịnala nke Norway: ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ọrụ aka, ngwa agha, ejiji ọdịnala, na oge ọkọchị, ị nwere ike ịga ịnya ịnyịnya ma ọ bụ ịnyịnya ibu, sonye na ngosipụta aka aka na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
N'ịgbanahụ akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị enwere ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na Oslo. Dịka ọmụmaatụ, ya Menlọ Holmenkollen na Ski Museum. Lọ elu ahụ bụ ụlọ elu na-agba ọsọ ski, otu n’ime ndị a kacha mara amara n’ụwa na ọ kachasị ochie. Muselọ ihe ngosi nka na-eme ka a njem site na puku afọ anọ nke ski ski na mba ma enwere ihe ngosi a raara nye egwuregwu a, snowboarding yana nyocha pola.
Ihe kacha mma bụ ihe ngosi panoramic na elu ụlọ elu ahụ Ọ na-enye ọmarịcha echiche nke Oslo dum. Ebe a na-emeghe oge niile n’agbata elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere anọ nke mgbede.
N'ikpeazụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nweghị mmasị ballet ma ọ bụ opera ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke a, ana m atụ aro ka ị gaa Lolọ Oslo Opera ọ bụ ụlọ ọgbara ọhụụ ma na-adọrọ mmasị. Ọ dị n'elu ọdụ ụgbọ mmiri ma bụrụ ebe dị egwu ịnọ ọdụ nwa oge, rịgoro n'elu ụlọ ya ma tụgharịa uche maka ọdịdị obodo nke obodo ahụ na fjord.
Windo windo na-amalite na larịị nke ala ọbụlagodi na-abanyeghị na ụlọ ahụ ị nwere ike ịlele n'ime, ime nwere ọtụtụ osisi ọkụ na ụdị ọgbara ọhụrụ na nke ọkụ n'otu oge ahụ. Nduzi na-eduzi dị na Bekee, Ee n'ezie.
Ndụmọdụ: budata na mkpanaka gị Official Oslo ngwa, n'efu maka Ipad, iphone na gam akporo ma ọ bụrụ na ị na-amasị ndị njem nleta gafere na-echeta na Oslo gafere nke otutu ihe nlere ndia anyi lere anya bu n'efu. Ogologo ndị okenye nwere ụzọ atọ, 24, 48 na 72 awa ma na-akwụ ụgwọ euro 42, 63 na 78.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Oslo » Ihe ị ga-ahụ na Oslo